युवतीको कुमा’रीत्व परीक्षण गर्ने कस्तो अनौठो तरिका ! हेर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
युवतीको कुमा’रीत्व परीक्षण गर्ने कस्तो अनौठो तरिका ! हेर्नुहोस
challengenepal January 13, 2021 1 min read
केटीहरुको पवित्रता पत्ता लगाउन सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो तरिका साउदी अरब र मिश्र जस्ता केही मुस्लिम देशमा प्रचलित छ । यसको लागि विवाहको दिन केटीले आफ्नो औला सेतो कपडामा बेरेर आफ्नो योनीमा राख्न लगाइन्छ । केही समयपछि औला बाहिर निकाल्दा यदि कपडामा र’गत लागेमा केटीलाई पवित्र मानिन्छ । युथोपियन कल्चरमा पनि गजबको तरीकाबाट केटीको शुद्वता पत्ता लगाइन्छ । त्यहाँ नयाँ दुलहीले स्कार्फ च्यापेर सुत्नुपर्छ । भोलिपल्ट यदि स्कार्फमा रगतको निशाना नभएमा महिलालाई कु’टपिट गर्छन्, र विवाह पनि तोडिन्छ । यदि स्कार्फमा र’गतको निशाना भएमा दुलाहाको घरमा उपहारसहित पठाउने चलन छ ।
महिलाको कुमारी’त्व जाँच गर्न भारतमा पनि एक प्रथा अझै छ । केही समुदायमा महिलाको सास रोकेर पानीभित्र उभिन लगाएर पवित्रता जाँच गर्छन् । यस क्रममा एक व्यक्तिले जमिनमा सय कदम चल्नु पर्छ । यदि यो समयमा महिलाले सास रोकेर स्थिर रहेमा पवित्र मानिन्छ । यसको साथै भारतमा अर्को पनि जाँच गर्ने तरिका छ । विवाहको दिन नयाँ दम्पत्तिले सफा रुमाल बिछ्यौनामा राख्नु पर्छ । भोलि बिहान रुमालमा रग’तको निशाना भएमा केटीलाई कुमा’रित्व भएकी मान्ने गर्छन् ।
त्यस्तै जार्जिया समेत अन्य पश्चिमा देशहरुमा केटीहरुको पवित्रता जाँच गर्नको लागि प्योरिटी औठी लगाउने गरिन्छ । यस औठी लगाउने समयमा केटीहरुले इश्र्वरको अगाडि विवाह पहिला कुनै पुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध स्थापित गर्ने छैन् भनेर कसम खाने गर्छन् । इन्डोनेशियामा महिलालाई प्रहरीमा जागिर खानको लागि पवित्रताको जाँच गर्छन् । यसको लागि विभागमा टु फिगर जाँच गर्नुपर्छ । जुन महिला यस जाँचमा फेल हुन्छिन् उसलाई जागिर मिल्दैन ।-
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv Challenge nepal challenge online tv Gopal pakhrin GOPAL TAMANG gopalpakhrin GOPALTAMANG च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल च्यालेन्जअन्लाइनटिभी च्यालेन्जनेपाल
Previous वाओ कती छिटो 24 मिनेटमा 10 लाख लाइक हेर्नुहोस यो जोडीको फोटोमा
Next पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ अचम्मको रहस्यहरु जानिराख्नुहोस्
नारीका ३२ लक्षणहरु, यस्ता छन् सबैले जानी राखौ
March 10, 2021 challengenepal
डिशहोमको ‘डिलर दाइको डिस्काउन्ट अफर’अन्तर्गत ८८ जनाको हातमा पर्यो १/१ लाख
February 5, 2021 challengenepal